Mujaahid Muuse Giire Oo Hargeysa Ku Geeriyooday Iyo Qora Boobe Yuusuf Oo Soo Bandhigay Taariikhdiisa
Friday May 22, 2020 - 21:44:07 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’, waxa galabta oo Jimce ahayd bishuna ku beegnayd 22ka Meey, 2020ka ku geeriyooday Ruug-caddaa halgameed oo ka mid ahaa raggii maal iyo nafba soo huray ee ku shuf beelay halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee ay SNM horseedka ahayd. Ku-sinnaan 1950kii ayuu ku dhashay Degmadan Hargeysa. Wuu ku barbaaray tacliintiisiina ku qaatay. Hooyadii waa Muumina Aadan Yoonis. Wuxu ifka kaga tegay shan hablood iyo laba wiil oo laba bahood ah.